IPL 2020 မှ ၁၃ ရာသီဘယ်လိုကုန်ဆုံးခဲ့သလဲ။
နေအိမ် IPL 2021 အသင်းများ
IPL 2020 နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ
The 13th IPL ၏ရာသီ အားလုံးနီးပါးအသင်းများကမှတ်တမ်းများအများကြီးနှင့်တကွ, အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ The IPL 2020 ရာသီကိုအားကစား ၁၁ လောင်းကစားပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့သည်။ စပွန်ဆာခေါင်းစဉ်ကို ၂၂၂ ကုcroေနီးပါးဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ရာသီဖွင့်ပွဲကို ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ အခြားရာသီများသည်Aprilပြီလတွင်ဖြစ်ခဲ့သည့်နေ့ရက်သည်အလွန်ထူးခြားသည်။
IPL 2020 တွင်ပါ ၀ င်သည့်အခွင့်အရေးရှစ်ခုရှိခဲ့ပြီးအဖွဲ့တိုင်းနီးပါးသည်အစည်းအဝေး၌မှတ်တမ်းများအချို့သိမ်းထားခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IPL 2020 ကိုဖြိုခွဲခြင်း၊ အကယ်၍ သင်လွဲချော်သွားပါကဘေးဖယ်ထားပါ။
IPL 2020 ၏နေရာနှင့်အချိန်ဇယား
IPL ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် United Arab Emirates တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ IPL ၏ယခင်ရာသီကိုmonthပြီလတွင်သာသတ်မှတ်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ရက်စွဲမှာအကျွမ်းတဝင်မရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ IPL ကိုချီတက်ဆန္ဒပြရန်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်းအချို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ BCCI သည်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့သည် IPL အချိန်ဇယား အခြားတိုင်းပြည်၌တည်၏။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် IPL ကို၎င်း၏ခရိုင်တွင်ကျင်းပရန်ကမ်းလှမ်းသော်လည်းပြိုင်ပွဲကိုမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေ။
ပြိုင်ပွဲအပေါ် Covid-19 ၏သက်ရောက်မှုများ
အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောအဓိကအကြောင်းပြချက် IPL 2020 နှောင့်နှေးခဲ့သည် COVID-19 ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါသည်နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာအဝှမ်းလုံးလုံးလျားလျားပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းမှာအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည် IPL Live Aprilပြီနှင့်မတ်လလအတွင်းစီစဉ်ထားမခံခဲ့ရပါဘူး။ BCCI သည်ကစားသမားများအားဗိုင်းရပ်စ်မှကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းကာလအတွင်းကုcroေတစ်ဆယ်နီးပါးကို covid-19 စစ်ဆေးမှုများတွင်သာအသုံးပြုခဲ့သည်။ covid-19 စမ်းသပ်မှုပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ကိုပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၀ နီးပါး ချင်နိုင်း Super Kings ပင်ပြိုင်ပွဲစတင်မီအပြုသဘောစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ covid-19 သည်သေစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သောကြောင့်မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများသည်ထိုတွင်စမတ်ကျသည်။ အသင်းကစားသမားတိုင်းအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းခြေရာခံခြင်းကွင်းကိုပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ကစားသမားတွင်မဆို Covid-19 လက္ခဏာတစ်ခုခုရှိပါကရောဂါကိုကုသရန်သင့်လျော်သောအစီအမံများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို
အသင်းနှင့်မကိုက်ညီသည်မှာ IPL ၏အမြင့်ဆုံးရမှတ်နှင့် IPL သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အနိမ့်ဆုံးရမှတ်ကိုဒီအသင်းသာရခဲ့သည်။ အဆိုပါပုံစံသည် ၂၀၂၀ တွင်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အသင်းသည်နေထွက်ချိန်ဟိုင်ဒါဘတ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ လာမည့်နောက်ဆက်တွဲပွဲတွင်အဖွဲ့သည် Kings IX Punjab အသင်းကိုဆိုးရွားစွာကစားခဲ့သည်။
အဖွဲ့သည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းကြောင့်အသင်း၏တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်လူသိများသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ပင် PLAYOFF များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ session ကို 2020 ခုနှစ်တွင်စိတ်ဆင်းရဲစရာပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အသင်းသည် IPL 2020 ၏အချက်များဇယားတွင်သတ္တမမြောက်နေရာတွင်ရှိသည်။ အဖွဲ့သည်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ အုပ်စုတွင်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကစားသမားများဖြစ်ကြသည် Suresh Raina နှင့် Harbhajan Singh က။ အဆိုပါ thallaivas ပွဲအနိုင်ရဖို့ရာသီအတွက်ခက်ခဲရုန်းကန်။
Kings IX ပန်ဂျပ်
တော်တော်လေး zienta နှင့်အခြားပါဝင်သူများအနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်သည်။ အဖွဲ့သည်အခြားအဖွဲ့များအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသင်းအနေဖြင့်စတင်ခြင်း, ဗိုလ်ကြီးနှင့်အတူပြissuesနာများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် Yuvraj Singh က ရန် KL Rahul။ အသင်းသည်ရာသီတိုင်းလိုလိုတွင်ဗိုလ်ကြီးများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်း၏လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင်ဗိုလ်ကြီး ၁၁ ယောက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ KL Rahul ၏အသင်းခေါင်းဆောင်နှင့်ကပ္ပတိန်အနေဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးခန့်မှန်းချက်များမှာ KL Rahul သည်လာမည့်ရာသီတွင်အသင်း၏အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဤအဖွဲ့မှချမှတ်ထားသောမှတ်တမ်းသည် IPL သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် IPL ခေါင်းစဉ်အများဆုံးရရှိခဲ့သဖြင့်ထင်ရှားသည်။ ရာသီ (၁၃) ပွဲတွင် (၅) ကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိကပ္ပတိန်မှာထူးခြားသောအရေအတွက်ဖြစ်သည် Rohit Sharma ကမန်ယူအသင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသင်းဖြစ်ပြီးအသင်း၏မျှော်လင့်ချက်များသည်ကြီးမားလှသည်။
Jaipur-based franchise သည် run-chase စွမ်းရည်ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးအောင်မြင်စွာပြေးနိုင်သော chase တွင်မှတ်တမ်းများစွာရှိသည်။ အသင်းသည် Kings IX ပန်ဂျပ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောပြေးလမ်း ၂၂၃ ခုကိုပြေး။ ၂၂၄ ပြေးကာ ၆ ကက်သည်။ Sanju Samson, ပြိုင်ပွဲများတွင်တသမတ်တည်းဖျော်ဖြေခဲ့သူကစားသမား, ဒီပွဲစဉ်၌အချို့သောအံ့ဘွယ်သောအမှုပြု၏။
၏ PLAYOFF ရောက်ရှိသောလေးသင်း IPL 2020 အချိန်ဇယား တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများ Bangalore၊ မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများ၊ ဒေလီမြို့တော်များနှင့် Sunrises Hyderabad တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးခြေစစ်ပွဲအဖွဲ့သည်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမဆုံးခြေစစ်ပွဲမှာဒေလီမြို့တော်နှင့်မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများအကြားကစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမွန်ဘိုင်းအခြေစိုက်လုပ်ငန်းသည်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဖျက်သိမ်းသူပတ် ၀ န်းကျင်ကို Royal Challengers Bangalore နှင့် Sunrises Hyderabad အကြားကစားခဲ့သည်။ SRH အသင်းကအနိုင်ရခဲ့ပြီးဒုတိယခြေစစ်ပွဲကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာဒေလီ Capitals အဖွဲ့ကအနိုင်ရခဲ့သည့် SRH နှင့် DC အကြားကစားခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲ၏ဗိုလ်လုပွဲသည်ထင်ရှားသောပွဲစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးလည်ပင်းမှလည်ပင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးရမှတ်များစားပွဲကိုအုပ်စိုးသောအသင်းနှစ်သင်းကြားတွင်ဗိုလ်လုပွဲကိုကစားခဲ့သည်။ Rohit Sharma နှင့် Shreyas Lyer ဦး ဆောင်သောဒေလီမြို့တော်များကဖမ်းဆီးမိခဲ့သောမွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းလူမျိုးများအကြားပြိုကွဲမှုသည်သန်းနှင့်ချီသောလူများတို့၏လက်သည်းများကိုကိုက်ခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများသည်ပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မပါဘဲပြေး ၁၅၇ ရမှတ်ဖြင့် ၁၅၆ ပြေးပြေးခြင်းကိုအောင်မြင်စွာပြေးခြင်းဖြင့်ပဉ္စမ IPL ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအသင်းနေဆဲပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရှစ်ဘောလုံးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
IPL 2020 ၏ရမှတ်များဇယားအရအသင်းများ၏နောက်ဆုံးအဆင့်
The IPL အမှတ်ဇယား:
၁ ။ မွန်ဘိုင်းအိန္ဒိယ
3. Sun Risers Hyderabad
4. တော်ဝင် Challengers ဘန်ဂလို
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်လိဂ်သည်ပျော်စရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးပွဲတိုင်းတွင်ပရိသတ်များအားကြက်သီးမွေးခုန်များပေးသည်။ အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလတွင် United Arab Emirates တွင်ကျင်းပရန်၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရောဂါကြောင့်တန်ချိန်များစွာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆုံး၌ခေါင်းစဉ်ကိုမွန်ဘိုင်းအခြေစိုက်ပရိသတ်များနှစ်သက်သောမွန်ဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ IPL ဆုဖလားများ.
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများ - IPL ၏ ဦး ဆောင်အဖွဲ့ကိုနက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ခြင်း!
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများ - IPL ၏ ဦး ဆောင်အဖွဲ့ကိုနက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ခြင်း! 12.03.2021
IPL 2021 လေလံ - အချိန်အားလုံး၏စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးလေလံ 14.03.2021
ဒေလီမြို့တော် - ဤ IPL အဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်! 12.03.2021